Ekhishini ingenye amakamelo ezibaluleke kakhulu kwanoma iyiphi indlu noma indlu. Isikhathi esining impela kuyinto encane ngobukhulu, kodwa ngosizo izinqumo design ungaba isikhala osebenza ngokugcwele. izinto zasekhishini akufanele kwenziwe nje amahle yesimanje, kodwa futhi elula kunazo. Proper nokubekwa ifenisha, umhlobiso kanye ukukhanyisa izonikeza Igumbi elula futhi ephezulu grade.
Okokuqala kubalulekile ukuhlela isikhala egumbini: kumelwe acabangele ukuma kanye nosayizi, indawo, ukutholakala Tinsita (air Amapayipi, izintambo zikagesi, njll ..). Kubalulekile ukukhetha ubuchwepheshe bese ubala izitsha (kuye ngokuthi ukwakheka kwe-umndeni). Mhlawumbe abanikazi impahla abe iphupho ukubeka bar, wenze sill ububanzi noma uhlangane igumbi nge kuvulandi. Zonke lezi izifiso kufanele kucatshangelwe ekuhleleni yayo.
Ukwakhiwa ikhishi elikhulu kuqedile ngaphandle nokuklanywa, ngoba kungenziwa kuhlangene egumbini lokuphumula. Kungaba kwehlukaniswa endaweni ukupheka nge ukwahlukanisa, lezingubo, ibha noma endaweni yesikhulumi. Isilinganiso usayizi isikhala ingahlukaniswa: ngu emakhiyubhi Uthwale phansi ezahlukene, udonga umhlobiso, njll ...
Kubalulekile ukucabangela lapho uzobe akhiwe ekhishini, itafula, izihlalo, izinto zasendlini. On the amancane ngosayizi ekhishini kuyodingeka ufunde ukuze wonge isikhala, ngoba semali imishini futhi ifenisha ngeke ingene lapha. Lokhu into ibangelwa ukususwa ukudla endaweni ngaphandle izindawo ekhishini. Ngezinye izikhathi elibekwe esinanyathiselwe, alo noma ngokuhambisa etafuleni.
Ukukhethwa nokubekwa imishini
ikhishi zifakwa efulethini kuhilela ukufakwa zonke zasendlini kunesidingo. Omunye izingxenye zalo eziyinhloko - ipuleti okungaba igesi, ugesi noma inhlanganisela. Konke kuncike lapho inethiwekhi ubunjiniyela exhunywe ekhaya. Modern igesi izitofu ukuthi kuphephile ngoba le igesi ukuvuza ifakwe isilawuli ekhethekile. Kodwa uma endlini nge gas, kufanele ukhethe izinto zikagesi. It is akhethiwe kuye ngohlobo ukupheka ebusweni. Ziyakwazi:
koqweqwe lwawo (abe eqinile, kodwa kunzima ukugeza);
insimbi engagqwali (lula ukuhlanza, kodwa kuyoba ibala);
ingilazi-Ceramic (ukhululekile futhi amahle, kodwa ezibizayo).
Negesi isitofu ibekwe baqhele emafasiteleni openable, ukuze umoya akusho ngiyozama ukucisha amalangabi. ibanga Minimum - 500 mm. Akubalulekile ukubeka Ukushisa amasu ekhoneni, ngoba phakathi kwaso izindonga kumele kube ibanga 60-70 mm. Ngaphezu kwalokho, ama-fatty Splashes kusuka ukudla kunzima kakhulu ugeze off odongeni (ngisho uma bewa etafuleni).
Kunoma ekhishini hood yesimanje kufanele kube - ngeke ugcine kusukela efulethini inuka futhi ifenisha eduze - kusuka amafutha insila. Imodeli okukhethiwe kufanele kukwazi ukusebenza izindlela ezimbili: outflow umoya nokusakaza. Kungcono ukukhetha ithekhniki ezinamandla nge surface bushelelezi futhi umsindo omncane. Hoods yilezi: zangaphansi (izitsha ezincane) futhi ihlanganiswe (kufanele kuhle angena ngaphakathi). Ukuphakama ukufakwa - ka 650-750 mm (kukalwa kusukela ipuleti).
emakhishini afakwe ngeke akwenze ngaphandle kwe-Umshini wokuwasha izitsha. Ngosizo umnikazi wendawo esasihlala kuyo yonga isikhathi esiningi nokuzikhandla, ikakhulukazi uma enendawo umkhaya omkhulu. Lolu hlobo ubuchwepheshe ongema wedwa, linamathele ifenisha, batholakala esitezi noma etafuleni. Umshini wokuwasha izitsha kufanele ibekwe eduze nosinki owakhelwe - kuyoba lula uxhumano yayo. Futhi ukuyithanda okuningi lula. Ukugeza kumelwe ukuwenzisisa lo msebenzi, kanye mixer yayo - okusezingeni eliphezulu. Asikho isidingo ukubeka eceleni ipuleti wakhe njengoba fly spray wakhe kuyakuma kuye. Too endaweni eqhelile futhi kudala isidina, ngakho ubude ephelele - 400-600 mm.
Seziqa ngokuvamile ukubeka ekhoneni ukuze kulula ukuvula umnyango wakhe. Isikhala esisele phambi kwakhe, kufanele unike ukuvula umnyango 90 degrees. Uma ufaka ukulondoloza ibanga kuze kube ipuleti, ifenisha futhi izindonga (njengoba uyalelwe).
ifenisha ibekwe kahle uzokwenza ekhishini akuyona kuphela ukhululekile, kodwa futhi kulula ukuyisebenzisa. Zonke izici zayo zivame esisogwini isimiso 'unxantathu ", oyingxenye isitoreji endaweni (esiqandisini) ukulungiselela (ukuwasha) nokupheka (ipuleti).
ukufakwa Ukuhlelwa ekhishini kuhlanganisa ifenisha kanye nemishini ngezindlela eziningana. Bona zingafakwa ngokuqondile, ie kanye eyodwa udonga. Lokhu samuntu ilungele izikhala ezincane (endaweni 6.12 m 2). ilungiselelo L angamasongo indlela: setha usesikhundleni ekhoneni, futhi imishini asele ibekwe eduze omunye izindonga. Ngezinye izikhathi ifenisha ekhishini ukubeka ngendlela le ncwadi "P" - le ndlela kufanelekile izakhiwo ezinkulu. Ingase futhi yakha isiqhingi - lesi sakhiwo sibukeka sisihle owawusemzini womzalwane.
Ukuphakama iKhabhinethi esiphansi kanye earphone we phezulu ngokuvamile 850 mm. . Kubantu ubude kungaba uyoluphakamisa ukuba 90-100 ithebula Ezokudla cm has a ukuphakama ephansi - 700-800 mm. Lezi nemingcele abhekwa ukhululekile kakhulu uwayehlalise.
Ukuze egumbini wabheka nice ihlangana kahle impahla ezizungezile, ongakhetha imishini ekhishini kudingeka ucabangele. Lokhu kuzosiza tintfo letitinhlobonhlobo kokuphothula. Ukuze uqale, nesimbozo ezikhethiwe phansi. Endlini mkhulu ngokhethe phansi wahlela ngaphansi "phansi efudumele".
Ukuze odongeni design kungcono ukukhetha vinyl noma lodonga okungezona nokwelukiweyo. Inketho ezinhle umhlobiso - lodonga for Umdwebo. abakhi abangochwepheshe Sisikisela lemva futhi zaveza izindonga semi isicwebezelisi latex upende. Ungakwazi ukuhlobisa isihlahla zabo, kodwa ngeke kudingeke ubhekane ngokucophelela uma uthanda. isixazululo Exclusive futhi okokuqala Ukunquma cap. Lokhu kwaziswa kahle imvelo, kulula ukuhlanza futhi kakhulu ukumelana ukusilaphazeka.
Ukuze enze ikhwalithi cuisine, kubalulekile ukuba sicabangele ekuhlanganiseni kwaso. Kahle ukukhanyisa ibekwe ukudala indawo ukhululekile futhi umphelelisi isikhala elingaphakathi. Lokhu kungenziwa sokuhlukanisa isikhala izigaba. ukukhanyisa Jikelele Ungadala Iqhwa, ibekwe maphakathi ekhishini. Kungenzeka ukuba esikhundleni strip LED ukuthi egobhoza azungezwe headset.
Le ndawo abasebenza yakhelwe ukupheka, ngakho kumele kube njengoba ukukhanya. Kulokhu, Halogen kufanelekile, izibani Fluorescent noma strip LED. I Sebawoti endaweni yokudlela bayokwazisa isimo ethokomele, ngakho-ke kungenzeka ukubona sconces enhle, isibani phansi noma Iqhwa ukulungisa ukuphakama.
Ukuthuthukiswa, ikhishi design kufanele kuhlanganiswe ukukhanyisa zalapho kuwo. Ngezansi okukhethwa kukho ekucubunguleni izindawo yilezi:
1. On ikhishi elincane kungenziwa ngokuhlanganiswa ezivamile spotlight ukukhanya ngaphezulu kwindawo yokusebenzela. Uma kukhona etafuleni lokudlela ezincane, ezibekwe phezu kwawo ukukhanya kakhulu.
2. Kubonakala iphinifa emangalisayo akhazimula. It kungenziwa kuphela - ngokwanele ukuze ufake phakathi ingilazi amaphepha strip LED.
3. Ukuze ukugqamisa endaweni yokudlela kufanelekile Iqhwa ezithakazelisayo ithunzi lelambu yokuqala, enziwe ngezandla zakhe. Leli kamelo kuyoba umuntu futhi engavamile.
4. emakhishini Modern namuhla umphelelisi phansi esikhanyayo, eshintsha umbala waso. Lokhu Lwenziwe by emapheshana LED, wabeka kanye isethi isizinda.
Wonke umuntu uyazi ukuthi isikhala esincane kudala eziningi ngokuphazamiseka. Nokho, ilungiselelo ikhishi elincane - kuyinto ehlukile wangempela. Kubalulekile ukuhlela kahle ifenisha kanye nemishini - ngeke ke liyakwazi ukubuyisela ukuntuleka isikhala. Umsebenzi oyinhloko ekudaleni ingaphakathi lizonwetshwa emagcekeni ngosizo visual effects. Lokhu kungafezwa ngokusebenzisa ngombala ukukhanya, izibuko, ingilazi kanye-chrome imikhiqizo. Umphumela ofanayo izoba ukukhanyisa kahle ezicatshangwe.
Endaweni encane akudingekile ukubeka izingcezu ezinkulu ifenisha, ngoba lizofuna besiyoba sikhulu kakhulu. Kodwa ungadlala nalokho usayizi, isibonelo, ukukhetha icwecwe futhi omkhulu ifenisha Amakhabethe. Umsebenzi kuhlanganisa endaweni engasetshenzisiwe (ngisho sill iwindi).
Ukwakhiwa ikhishi ifenisha encane - akulula. Kungcono ukubeka kude emnyango, ukuze ngingasebenzisi kucicanise isikhala. Sisebenzisa ozidinga kakhulu futhi indawo yonke ucabangisisa. Sihlela indawo-earphone ezincane noma endaweni yokudlela, lapho ingase ikhishwe esibayeni ekhishini. Akubalulekile ukulayisha inqwaba izakhi ingaphakathi zokuhlobisa.
izitsha Extra kanye izesekeli angaluboni efihliwe emehlweni izindawo, isibonelo ebhokisini ngaphansi etafuleni lokudlela. On emashalofini evulekile ume kahle izinto eziyizikhumbuzo ezikhangayo. Siza ahlele siqhingi isikhala maphakathi egumbini. Zibonisa zonke izinto ezidingekayo. Ikhishi amakhabethe beka ezindongeni zifana kuya komunye nomunye. Londoloza endaweni ezisebenzisekayo ngeke yakhiwe noma okwesikhashana ku imishini kubakaki.
Inhlangano ekhishini isikhala indlu yangasese
Ngokuvamile, ekhishini owawusemzini womzalwane ngcono kuhilela ukusetshenziswa ngezinto zemvelo. Kodwa ungakhohlwa mayelana isitayela ingaphakathi, esenganyelwe yonke indlu. Konke kufanele sibheke enhle kakhulu, engavamile futhi zikhululekile. Izinkuni panel mahle ekhishini izindonga, usimende zokuhlobisa futhi yendwangu lodonga. Ezingosini zezingxoxo encane zisebenzisa ukukhanya shades of yokuqedela futhi ivulekile - amnyama.
Ikhishi indlu yangasese kufanele ihlukaniswe yaba izingxenye: ukusebenza kanye yokudlela. Ngenhla ngamunye wabo kuyodingeka yayo ukukhanyisa lwemidlalo. Yokusebenzela ukuhlukanisa izibani Fluorescent ezibekwe ngenhla isitofu, usinki usule. Ifanele etafuleni lokudlela isibani, sconce noma Iqhwa. Ukuze izingxenye ngokwahlukana ngezinye izikhathi ukusebenzisa Uthwale ezahlukene phansi. Ubulili endaweni umsebenzi embozwe tile Ceramic, ethebuleni - flooring, laminate.
zakhiwo ngokuvamile zitholakala amafulethi-studios. Azikho Izindonga zangaphakathi, okungukuthi indawo ekhishini kuhlangene egumbini lokuphumula, cwaningo noma lokulala. ikhishi-eziphilayo Igumbi ilungiselelo kwenziwe ngokuhambisana nemithetho ethile:
1. Ikhishi isimo zingakhiqiza ezinwetshiwe egumbini lokuphumula. Ngisho noma wonke efulethini senziwa izitayela ezahlukene, ingaphakathi studio kufanele aphelele by design futhi Iphalethi.
2. Vula i-sill iwindi emsebenzini - kuzoba zokusebenza ngaphezulu noma endaweni yokudlela.
3. Ngomusa futhi ubukeka compact ekhishini endaweni Imishini (isiqandisi, isitofu, Umshini wokuwasha izitsha). Igumbi Ikhishi-eziphilayo - the siwela kakhulu egumbini, ngakho-ke asikho isidingo ukulayisha ezihlukahlukene zikagesi kanye ifenisha.
4. Qinisekisa ukusetha hood ukupheka Splashes engabathinti amakhethini, ifenisha, asezindongeni, izingubo zokulala. Ngaphezu kwalokho, izinhlayiya fat alilihle ngoba kuthinta impilo yakho. Kufanele makudle hood esakhelwe ngaphakathi.
5. Ikhishi Izinsiza kusebenza (izithombe kungabonwa ngezansi) kuhilela ukusetshenziswa ifenisha foldable, mobile nokuguqula. Egumbini lokuphumula uyobheka omkhulu nethebula transformer, okuyinto siguqule kusuka komncane kuya enkulu. Ikhishi usethe ukuba bakhuphukele ophahleni - ngakho esikhundleni izinto ezinkulu kuwo. Uma ungakwazi oda it, ungafaka ifenisha ejwayelekile bese uhlela on the amakhabethe engenhla kubhasikidi ngoba trifles ahlukahlukene. Ukuze ulondoloze isikhala, ibha ifakwe niches futhi kufanale agqoke izikhindi zangaphansi yokugcina izincwadi, zokubhala izinto, izinto kanye nezinye izinto.
6. Ukuze studio kangcono zikagesi buthule. Akukona ubuhlungu ekuphumuleni noma ukulala izivakashi.
7. Construction we ekhishini kufanele kwenziwe ngaphandle Medley ezingadingekile, izinto ezinkulu, inani elikhulu izakhi okuhlobisa. Ezingosini zezingxoxo ezincane zisebenzisa-earphone nge mbumbulu ecwebezelayo futhi inani elikhulu luminaires. Ukuqedela kufanelekile ukukhanya imibala: grey, green, beige, blue nabanye.
8. ukukhanyisa Proper kuzosiza zibukeke bandise isikhala. Omunye iwindi ayikwazi ngokwanele kukhanyisa endaweni umsebenzi, futhi zibukeke kunciphisa twilight egumbini ndawo. Kulokhu, usizo spotlight phezulu headset, iphinifa, amakhabethe ngaphakathi phezu kwendawo yokudlela.
I ewumngcingo ekhishini
ikhishi afakwe, izithombe zazo lapha ngenzansi, kubukeka esingavamile ngempela. Zonke ngenxa yokuthi isikhala side futhi lincane nzima ukuhlela kahle. Uma ngivule umzila wokukhulumisana, igumbi yandisa, bese nina nihlela ukuba esilindele yakho. Kwezinye izimo, wacabanga nokubekwa ifenisha, izesekeli umhlobiso. izinto besiyoba sikhulu akuzona kufanelekile, ngakho-ke kufanele kube compact kodwa evulekile. Ifenisha kufakwe nge zangaphansi ehlukahlukene emashalofini, kanye olungaphambili lwesonto yayo yenziwa esibukweni. A emashalofini evulekile ambalwa bese evele esobala ukudala umuzwa inkululeko.
Nweba isikhala kungaba ngombala ukukhanya - lokhu igumbi ethokomele futhi ivulekile. Kulokhu silingane blue, oluhlaza, gray noma pink iphepha lodonga mahhala (upende). Ngaphezu izindonga, kudingeka ucabangele sekugcineni ophahleni, okuyinto engcono wahlukanise esishintshashintshayo. Ukuze ushintshe ukujula yayo, ezihlukahlukene amafomu yezakhiwo inlay of Gypsum futhi okusezingeni eliphezulu isakhiwo ngobuningi. Ungenza esibukweni nophahla ngaphakathi, ukudlala ukukhanya amathoni amnyama. zone ngamunye kuqokonyiswa isibani sakhe.
Ukwakhiwa ikhishi elincane kuhilela ukusetshenziswa isikhala ngaphansi kwewindi. Ngesikhathi wokuvula efanayo ngokwayo lihlotshiswe amakhethini ovundlile noma amafasitela enhle. Sill iwindi livame ukusetshenziswa njengoba ishalofu noma ithebula ukuze uqhubeke.
Lapho umsebenzi uphela ekhishini kufanele yokuxazulula impikiswano yokuthi khona etafuleni lokudlela. Esikhathini umngcingo ukulingana Convertible kuphela kungenziwa siguqulwe noma kuhlangene ithebula efasiteleni. funa Lukhulu alo amamodeli azehlise izakhi uhlangothi, futhi kukhona zangaphansi encane ukugcina izinto ezahlukene.
abantu Creative bathambekele ukuphelela, ngakho bafuna ukusebenzisa umklamo ekhishini ngokuhambisana nayo yonke izitayela fashion. Ukwakhiwa ekhishini yesimanje - akuyona nje ukusebenza, kodwa futhi enhle kakhulu. Ngezansi okukhethwa kukho nomklamo walo ongajwayelekile yilezi:
1. Namhlanje zithandwa isitayela minimalist, okubandakanya ukusetshenziswa amafomu alula elingaphakathi, Palette elinganiselwe kanye nenombolo okungenani izakhi zokuhlobisa. Kulesi ekhishini kungenziwa banikwa imishini yesimanje kakhulu futhi electronics.
2. kukho olukhulu ekhishini - kukhethwa omnyama nomhlophe Iphalethi nge iyashintsha iyaphupha ibe shades. Isikhathi esining impela kulekelelwa exotic ugodo ingaphakathi (Wenge, Zebrano et al.).
3. emakhishini Modern ngokuvamile kuhlanganiswe ekamelweni lokudlela noma egumbini lokuphumula. Ayevame itafula esikhundleni bar futhi ibekwe esiqhingini ekhishini.
4. obugagu egumbini uyonika lethusi, ithini noma nickel nokufakwa. Ngesikhathi esifanayo liyokuma isikhathi eside ngangokunokwenzeka.
5. Ngaphezu ahlukene ekhishini ukukhanyisa zigaba, ngokuvamile zisebenzisa ezengeziwe ukukhanyisa ibha, eshalofini, phezulu kanye phansi headset. Kungaba ukulawulwa elawulwa kude.
Iphupho abantu abaningi - ekhishini libanzi futhi enhle. Ukuthuthukiswa Functional, umklamo wamagceke ukuba kwenziwe kahle. Yingaleso sikhathi-ke ekudleni uzokwazi uphumule hhayi kuphela abanikazi, kodwa futhi izivakashi zabo.
Ukwakheka "Isigodlo itiye" umfutho ophezulu wegazi. "Itiye Izigodlo": Izibuyekezo
Wosizo Lokuqala kukhompyutha: siphathe igciwane "iThrojani"